Raaga Primeer Liigii: Maark Laawransaniin - BBC News Afaan Oromoo
Raaga Primeer Liigii: Maark Laawransaniin
Maanchistar Yunaayitid erga Totanihaam torban darbe mo'atan booda gara moo'ichaatti waan deebi'an fakkaata. Haa ta'u malee, tapha Dilbata kana Cheelsii waliin qabaniif, dursaa Primeer Liigii kan ta'an Maanchastar Siitiif iddoo guddaa gadhiisuu laata?
Ogeessi kubbaa miilaa BBC Maark Laawransan waan jedhu: "Wayita ammaa Siitii dhaabuun wayi hin danda'amu - garuu kun jijjiiramuu danda'a. Haa ta'uutii, tapha Dilbataan Istaadiyeema Etihaaditti Arsanaaliin ni mo'atu jedheen yaada.
"Akkasumas Yunaayitid Cheelsii waliin gaafa Dilbataa waan taphatuf, Siitiif carraa dursuu isaa akka itti fufu ni gargaara. "
Laawroon taphni Istaamford Biriijitti taasifamu 1-1 qixa xumurama jedha - kanatti waliigaltaa? Taphataa duraanii waliin kana waliin morki mee.
Taphoonni hundi kana jalqaban 15:00 GMT'tti, yoo jijjiirameera jedhamee ibsame malee.
Istook v Leesistar (12:30)
Torban dabre Istook 1-0 Waatifoordiin moo'ateera - bara tapha Kanaan moo'icha isa jalqabaati.
Istookiif walqixa bahuun Leesistar caalaa muufachiisaan, Puyeelif garuu lama keessaa lama osoo hin moo'amin tahaaf. Istookiif ammoo akka jalqabbiitti gargaara.
Raagni Laawroo: 1-1
Haadarsfiild v Weest Biroom
Taphoonni dirree ofiitti taphataman akkasii Haadarsfiildif guddoo dansa. Maanchistar Yunaayitidiin erga mo'atanii booda, tapha Liivarpuul wajjin turban darbe taasisan irratti tapha gaarii hin agarsiisne.
Ammammoo gara West Biroom ilaaluun 'mo'amuu hin qabnu' jechaa jiru.
West Biroom gara Hadarsfild dhaqee ni mo'atan jedha.
Raagni Laawroo: 0-2
Niwukaastil v Boornmaz
Niwukaastilitti walqixa bahuun jalqabbii gaarii natti fakkaata. Kilaboota Pirimeer Liigii kamiyyuu bira dhaqxee walqixa baata taanaan - jalqabbii gaariidha, ittuma daddabalaa deemta. Warreen qabxiin 1 - 6 keessa jiran garuu tapha hunda akka mo'atan irraa eegama.
Saawuzihaampitan v Barnileey
Leenjisaan Saawuzihaampitan Maawuriisiyoo Peleegrinoo, Raafaa Beeniteezin leenji'ee, taphateera. Kanaafuu qindaa'inni wanta ijoodha. Warri Saawuzihaampitan taphoota 10 keessaa galchii 9 duwwaa lakkoofsisan. Haata'u malee, taphattoota gahaa galchii galchan qabu.
Akka isaanis 1-10 keessatti xumuranis nan eega, tapha kanas ni mo'atu.
Raagni Laawroo: 2-1
Siwaansii v Biraaytan
Siwaansiin garee nama dhibudha. Torban tokko ajaa'ibaadha ennaa jettu, turban kaan ammoo gadi bu'ee argama.
Kilabni koo inni duraanii Biraaytan ammoo, yoo gaarii taphachuu baates qabxii fida.
Weestihaam v Liivarpuul
Weestihaam taphattoota qaqqaalii muraasa haa qabaatan malee, ittisaadhaan garuu torban kana baayyee rakkatu. Faccisaa qaqqaalii tahantu isaan barbaachisa.
Totanhaam v Kristaal Paalaas (12:00)
Ofitti amanamummaan Totanhaam erga Roobii darbe Riyaal Maadriidiin mo'atan booda olka'eera.
Paalaas ammayyuu qabxiin gara gadii haa jiraatan malee, sochiin taphaa isaanii hooggansa Rooy Hodsan jalatti fooyya'eera: Cheelsii mo'atan, Niwukaastilitti qabxii argachuun isaanirra ture hintaane, akkasumas West Haam waliin qabxii qooddatan.
Raagni Laawroo: 2-0
Maanchistar Siitii v Arsanaal (14:15)
Wayita ammaa Siitii dhaabuun wayi hin danda'amu - garuu kun jijjiiramuu danda'a. Sababoota garagaraatif jijjiiramuu danda'a, keessattuu miidhamaan. Haatahu malee, qabxii 30 argachuu qaban keessaa 28 argachuun milkaa'aa jiru.
Arsan Wengar yeroo hunda kilaboota gurguddoo bira dhaquun 'kubbaa miilaa bareedaa taphanna' jedhu. 'Koottaa jifannee taphanna' hin jedhan. Yoo jifatan, karri hunduu banaa ta'a.
Haa ta'u malee, Wengar waggoota muraasaan dura gara Siitii karoora qabatanii deeman - 2-0 injifatan
Cheelsii v Maanchistar yunnayitid (16:30)
Yunaayitid kilaboota gurguddoo waliin dirree isaatiin ala enna taphatan, Joosee Mooriinoon yeroo hunda qabxii qabatanii bahu - Liivarpuulitti akkuma tahe. Akkuma Kanaan duras ni godha.
Haga danda'een Istaamfoord Biriijitti ibidda ibiddaan dhaamsuuf yaala. Haala cimaa ta'een ittisuu yaala.
Evartan v Waatifoord (16:30)
Hogannaa yeroo Evartan, Deevid Ansiwoorz qacelloottin beeka. Taphoota lama mo'amuu isaatiin wanta irra gahaa jiru amanuun dadhaba.
Waatifoord jalqabbii gaarii agarsiisanis Cheelsiirraa waa argachuu danda'u turan. Istook waliinis mo'aman. Yeroo ammaa wanti irra jiran dansa miti.